Home Wararka Qarax lagu weeraray taliyaha QG booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole
Qarax lagu weeraray taliyaha QG booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole
Waxaa goordhawayd Qarax xoggan oo ah noooca ismiidaamin ah uu ka dhacay magaallada Muqdisho gaar ahaan isbitaal baanadir. Qaraxan oo ahaa mid laga soo buuxiyey gaari waxa ay wararku sheegayaan in taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole lagu weeraray gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa.
Waxaa jira khaasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhashay qaraxa. Ilaa iyo hada ma cada khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxa balse waxaa jira dhimasho iyo dhaawaca taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay in uu ka badbaaday qaraxa taliye Farxaan Qaroole kaas lala beegsaday gaarigii uu saarnaa. Kooxda gurmadka deg dega ah ayaa goobta gaaray sidoo kale ciidamada amaanka ayaa bilaabay baaritaano dheeraad ah.